Iibhola zenyama kwi-carrot kunye ne-zucchini sauce | Ukupheka kweKhitshi
Iibhola zenyama kwi-carrot kunye ne-zucchini sauce
UMaria vazquez | 27/06/2021 10:00 | Ukupheka kwenyama, I-Salsas
Xa umntu engazi ukuba alungiselele ntoni ukuze atye, iibhola zenyama zihlala zibonakala zilungile. Singazenza ngenyama ebomvu, yenkukhu, I-cuttlefish okanye i-vegan, njengale sizakuyicebisa kwiiveki ezimbalwa, kwaye Bakhaphe ngeesosi zazo zonke iintlobo. Ezi zebhola zenyama kwi-carrot kunye ne-zucchini sauce yenye yeendlela ezininzi esinazo.
Sizenzile ezi bhola zenyama ngendlela yesiko nge Umxube wenkomo kunye nengulube. Yongeza kwintlama itswele elincinci, iqanda kunye nesonka esifakwe ebisini ukuze zibenze juicier. Ngokuphathelele isosi, asinakukuthanda ngakumbi! Uluvo lokudibanisa iminqathe kunye ne-zucchini alunakuphumelela.
Isosi ityebe kakhulu Sigcina inxenye yayo ukuze sizenzele amaqanda aneenkwenkwezi ngobusuku obunye, akukho nto iphoswa apha! Yisosi enemibala emininzi, inencasa eninzi kwaye isempilweni kakhulu njengoko uza kubona xa ubona uluhlu lwezithako. Ngaba unesibindi sokulungiselela esi sidlo? Khuphela uluhlu lwezithako kwaye uyokuthenga!
Ezi zibhola zenyama kunye nesanqante kunye ne-zucchini isosi sisitya esikhulu ngalo naliphi na ixesha lonyaka kwaye ziya kuhlala kwiintsuku ezintathu kwifriji.
Kwibhola yenyama (iiyunithi ezili-15):
480g. inyama egayiweyo (inyama yenkomo kunye nengulube)
Imvuthuluka yesilayi sesonka esifakwe elubisini
10 g. Imvuthuluka yesonka
I-100 g. Utamatisi othosiweyo
I-100 ml yomhluzi wemifuno
Gweba itswele kakuhle kwaye udibanise zonke izithako zebhola yenyama (ngaphandle komgubo) ngezandla zakho.
Emva koko, siyiloba iibhola zenyama kwaye sizibethe ngomgubo kancinci.
Okulandelayo, sitshisa iicephe ezi-3 zeoyile epanini kwaye siziqobele iibhola zenyama de zibe nombala omdaka (baya kugqiba ukupheka kwisosi). Njengoko zimdaka, zikhuphe kwaye uzigcinele ipleyiti.
Kwioyile efanayo (kungafuneka wongeze icephe elingaphezulu) ngoku sitya i-anyanisi kunye nomnqathe osikwe kakuhle kangangemizuzu esi-8 njengesiseko sesosi.
Emva koko, yongeza i-zucchini kwiityhubhu ezincinci, ixesha kunye nokupheka eminye imizuzu emine.
Emva kwexesha, sithela i-tomato kunye nomhluzi, xuba kakuhle ukupheka yonke imizuzu eyi-8-10.
Emva koko, siyityumza isosi kwaye siyibuyisele emlilweni, sibeke iibhola zenyama kwisosi. Pheka imizuzu emihlanu ngesiciko, ujike iibhola zenyama phakathi kokupheka kwaye ucime ubushushu.
Sikhonza iibhola zenyama kwisanqante eshushu kunye nesosi ye-zucchini kwaye sigcine eseleyo kwisikhongozeli esingangeni moya, sibasa kwifriji bakube sele benomsindo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kwenyama » Iibhola zenyama kwi-carrot kunye ne-zucchini sauce
Imissels ukuya kwi-vinaigrette
Isaladi yeetapile kunye nepepile